Ithegi: iphepha lokufika | Martech Zone
Ithegi: iphepha lokufika
NgoMvulo, Novemba 22, 2021 NgoMvulo, Meyi 16, 2022 Douglas Karr
NgoLwesithathu, Matshi 3, 2021 NgoMvulo, Meyi 16, 2022 Douglas Karr
Ngelixa uninzi lwabathengisi lufaka nje ifom kwiphepha leWordPress, ayisiyonyani leyo yenziwe kakuhle, eguqula iphepha lokufika. Amaphepha okufika ahlala eneempawu ezininzi kunye nezibonelelo ezihambelana nazo: Iziphazamiso ezincinci-Cinga ngamaphepha akho okufika njengokuphela kwendlela ngaphandle kweziphazamiso. Ukuhamba, iibar ezisecaleni, iinyawo, kunye nezinye izinto ezinokuphazamisa undwendwe lwakho. Umakhi wephepha lokufika wenza ukuba ubonelele ngendlela ecacileyo yokuguqula ngaphandle kokuphazamiseka. Umdibaniso- Njenge
Izinto eziphambili ezibonakalayo zoYilo lwePhepha lokuHamba
NgoLwesine, Julayi 9, 2020 NgoLwesine, Julayi 9, 2020 Douglas Karr
Abantu base-Uplers bavelise le infographic esebenzayo, Ukuntywila okunzulu kusetyenziso lweeMboniso kwiiPhepha lokuHamba, eligubungela indlela yokufika kwamaphepha kunye nezinto ezibonakalayo ezibonakalayo ezinefuthe lokutshintsha. Izizathu zokuSebenzisa iiNgcaciso zamaphepha e-Landing amagama aphambili kuPhando lweOrganic -Ngokwenza iphepha lokufika elilungiselelwe iinjini zokukhangela, ungabhena kwizilungiso kwaye ufumane ukugcwala okufanelekileyo kwiphepha lakho lokufika. Ngokungakwenzi kakuhle, unga